Ukuchacha okungalinganiyo kwangaphambili kushishino kunye nohambo lwamazwe ngamazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukuchacha okungalinganiyo kwangaphambili kushishino kunye nohambo lwamazwe ngamazwe
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuchacha okungalinganiyo kwangaphambili kushishino kunye nohambo lwamazwe ngamazwe.
Inkcitho yohambo lwamazwe ngamazwe luqikelelwa ukufikelela kwi-72% yamanqanaba e-2019 kwi-2022. Icandelo alilindelekanga ukuba libuyiselwe ngokupheleleyo kude kube yi-2024 okanye i-2025.
Vula ngokupheleleyo kwaye uqalise kwakhona ukusetyenzwa kwe-visa yabatyeleli kwi-ambassy yase-US kunye ne-consulates.
Ukuqinisekisa ukuba amagosa oLawulo lweCustoms kunye noKhuseleko lweMida kunye noKhuseleko lwezoThutho anezibonelelo ezifanelekileyo.
Phumelela ukuBuyiselwa kweBrand USA Act ukubonelela ngenkxaso-mali yoncedo olungxamisekileyo kwi-Brand USA, umbutho wentengiso wase-United States.
Kwiintsuku emva kokuba i-US iphinde yawuvula umhlaba wayo kunye nemida yomoya ukuba igonywe abatyeleli bamazwe aphesheya, uHambo lwase-US lukhuphe uqikelelo lwayo oluphindwe kabini olubonisa ukuchacha okungalinganiyo kwamacandelo ohambo lwamazwe ngamazwe kunye nolweshishini, ngelixa uhambo lokuzonwabisa lwasekhaya lubuyele kumanqanaba angaphambi kobhubhane.
Uqikelelo, olusekwe kuhlalutyo oluvela kuQoqosho loKhenketho, iiprojekthi ezithi uhambo lwasekhaya lokuzonwabisa luya kuqhubeka luqhubela phambili ukuchacha kweshishini lezokhenketho lase-US kwixesha elikufuphi. Eli candelo kuqikelelwa ukuba liya kodlula amanqanaba obhubhane ngo-2022 nangaphaya.
Inkcitho yokuhamba kweshishini lasekhaya kulindeleke ukuba ifikelele kwi-76% yamanqanaba e-2019 ngo-2022 ngelixa icandelo alilindelekanga ukuba libuyiselwe ngokupheleleyo kude kube ngu-2024.
Ngelixa iingcali zibona izizathu ezininzi zokuba nethemba, uqikelelo lwabo lubonisa ukuba ukubuya kohambo akulingani nomsebenzi omninzi ongaphambili wokuqinisekisa ukuba onke amacandelo afikelela kumanqanaba angaphambi kobhubhane.
Iingcali zikholelwa ukuba i-US inokusebenzisa imigaqo-nkqubo ehlakaniphile, esebenzayo ebuyisela iindwendwe zamazwe ngamazwe ngokukhawuleza kwaye ikhuthaze ushishino kunye nohambo lobuchwephesha ukukhawulezisa uqoqosho kunye nemisebenzi.
Imigaqo-nkqubo efunekayo ukukhawulezisa ukuchacha kweshishini lokuhamba:
Vula ngokupheleleyo kwaye uqalise kwakhona ukusetyenzwa kwe-visa yabatyeleli kwi-ambassy yase-US kunye ne-consulates
Ukuqinisekisa uKhuseleko lweSintu kunye noKhuseleko lweMida kunye Ulawulo loKhuselo loKhuseleko amagosa anezibonelelo ezaneleyo
Dlula ukuBuyisela Igama leBrand Umthetho wokubonelela ngenkxaso-mali yoncedo olungxamisekileyo kwi-Brand USA, umbutho wokuthengisa kwindawo yase-United States
Ukumisela iikhredithi zerhafu zexeshana ukubuyisela imfuno yeentlanganiso zobuchwephesha kunye nemisitho
Uzinziso lwemigaqo-nkqubo lunokunceda ukuqinisekisa ukuchacha ngakumbi njengoko i-US ijolise ekubuyiseleni yona ngokwayo njengendawo ephezulu yokusingwa ehlabathini kubakhenkethi behlabathi.